Taalladdii loo taagay Andre Iniesta oo isbedel lagu sameeyey & Laacibka oo isagoo farraxsan ka hadlay – Gool FM
Taalladdii loo taagay Andre Iniesta oo isbedel lagu sameeyey & Laacibka oo isagoo farraxsan ka hadlay
Haaruun June 20, 2020
(Albacete) 20 Juun 2020. Waxaa isbedel lagu sameeyey Taalladdii loo taagay Andre Iniesta, iyadoo isbedelkaas uu farxad ka muujiyey laacibkii hore ee kooxda Barcelona.
Dad badan oo uu isagu ku jiro ayaa ku maadeystay taalladaan loo dhisay Andre Iniesta, taasoo ahayd mid gabi ahaanba uu qaawanaa oo uusan wax dhar ah wadan.
Andre Iniesta ayaa ka mahadceliyey in ugu dambeyn cawradiisa loo asturay oo buumo loo geliyey Taallada loo taagay ee isaga u muuqaalka eg.
Laacibkan khadka dhexe ee Andre Iniesta ayaa ku muteystay in Taalladaan looga dhiso dalka Spain, kaddib markii uu dhaliyey goolkii guusha ee xulkiisa qaranka Spain uu ku qaaday koobkii Adduunka ee sanadkii 2010-kii, Koonfur Afrika.
Iniesta ayaa dhaliyey goolkaas dhaliyey dhammaadkii waqtigii dheeriga ahaa ee kulankaas, waxaana xulkiisa Spain uu 1-0 ku garaacay Holland, iyadoo final-kaas 2010-kii ee koobka Adduunka ee u ka dhacay Magaalada Johannesburg.
Yeelkeede, Taallada loo taagay Iniesta waxaa ka maqnaa waxa ugu muhiimsan oo ahaa dharkiisa oo gabi ahaanba Taalladu waxay ahayd mid qaawan oo ay xubintiisa tartanku muuqatay.
Ugu dambeyntii markii lagu maadeystay waxaa la garwaaqsaday in la bedelo, waxaana lagu soo daray Taallada oo lo geliyey Buumo, inkastoo weli Iniesta uu feero qaawan yahay.
36-sano jirkaan ayay farxad ka muujiyey markii uu arkay isbedelka lagu sameeyay Tallaada loo dhisay, waana ka soo hadlay Iniesta oo haatan u ciyaara kooxda kooxda reer Japan ee Vissel Kobe.
“Waad ku mahadsan tihiin inaad buumo ii geliseen” ayuu soo qoray Iniesta, wuxuuna sii raaciyay emoji qosol ah.
Magaalada uu ka soo jeedo Iniesta ayaa ku sharfaya wiilkooda 10 sano guuradii ka soo wareegatay goolkaasi caanka noqday ee laacibku ka dhaliyey Holland.
Saddex ka mid ah Kooxaha waa weyn ee Premier League oo iskula dheggan saxiixa xiddig ka ciyaara horyaalka Bundesliga
Kooxda Brighton oo guul soo laabasho ah ka gaartay Arsenal oo marti u aheyd… +SAWIRRO